UV Germicidal Lamp, UV Chiedza, Ultraviolet Chiedza - Kanfur
UV yemagetsi mwenje
254nm UVC Mwenje
222nm Kure UVC mwenje
UV Sterilizer bhokisi
Mhepo yemhando yekutarisa
"Yakanakisa mhando, Yakanakisa sevhisi" inogara iri yedu chinangwa chekambani, Kanfur inotamba zvedu zvigadzirwa zvehunyanzvi kupa vatengi nezvakanakisa zvigadzirwa, mitengo yakanakisa, yakakwana yekutengesa network uye mushure mekutengesa sevhisi uye edza nepatinogona napo kuitira Hutano hwevanhu!
Sterilization, disinfection, Peculiar hwema bvisa, zvinounza iwe hupenyu hweheathy
35W UV mwenje
UV mwenje trolley
Dzidza Zvakawanda nezve
222NM FAR UVC RAMBI
Kanfur inodada kuunza iyo 222nm Far UVC Mwenje, yedu mutsara yakasvinwa 222nm Far UV-C excimer mwenje ma module ekushandisa ekuderedza hutachiona.
Yakafirita 222nm Kure UVC Mwenje inogona kushandiswa zvakachengetedzeka munzvimbo dzisina vanhu uye dzinogarwa pasina kuisa njodzi kuhutano kuvanhu kana ichishandiswa mukati memiganhu yazvino yekuratidzira yakakurudzirwa neAmerican Conference yeHurumende Yemabhizimusi maHigienists (ACGIH ®) kana zvinodiwa zveIEC 62471.
Hapana chinokuvadza kuvanhu nemhuka, zvakachengeteka zvakanyanya kupfuura echinyakare 254 nm UVC mwenje
Kudzivirirwa Kwekuchengetedza Filter Tekinoroji Inosanganisirwa Kuona Narrowband 222nm Emission
Mercury Yemahara - Yemagariro Shamwari
Inobudirira Germicidal Wavelength
Kubudirira Kuderedza kweVirusi, Bhakitiriya, uye Spores
Wide Uchishandisa Tembiricha
Pakarepo On / Off paZere Kubuda Simba
Hapana Hupenyu Hwese Kuderedzwa neKuwanzo Pa / Off Makyuru
Kugadzirwa kwegore negore
Kanfur ine yedu yehunyanzvi yekugadzira tambo neepamberi yekugadzira uye tekinoroji yekugadzirisa, iyo yekugadzira yepagore inosvika ku100000 seti.
Unyanzvi uye hwakagadzikana R & D, kugadzirwa uye timu yekutengesa, ine vashandi ve160, kambani iri kugara ichizivisa matarenda epamberi.
Chitupa chePatent chawanikwa
Neboka rehunyanzvi reR & D, zvigadzirwa zvese zvakagadzirwa zvakasununguka uye zvinogadzirwa nesu, isu takawana makumi mashanu epamutemo matekinoroji tekinoroji mu ..
Kutengesa kwegore negore
Kutengeserana kwemumba nekutengeserana kwekunze zvikwata zviviri zvekutengesa, zvinotumirwa kune dzinopfuura nyika makumi mashanu pasirese uye Kutengesa kwegore kusvika kuUSd4000000.
About iyo kambani
Yazvimirira Production mutsetse
Rambi reUV rinotaridzika kuva rakanaka uye rakatsiga, ndakawana kana remwanakomana wangu. Iyo zvakare ine iri kure kutonga, iri nyore kwazvo kushanda. Icho chaicho dhizaini yemunhu. Icho chaicho chakanakisa chiitiko chekutenga.
Iko kuendeswa kweDHL kuchikurumidza, mazuva mashanu chete ini ndakagamuchira mwenje wangu weultraviolet. Ini ndakaishandisa maererano nemirairidzo yayo. Zviri nyore kwazvo, iine matatu giya nguva yekudzivirira, ndinotenda ichandipa imba yekutandarira ine hutano.
Ndiri kugutsikana kwazvo neiyi UV mwenje. Yakasungirirwa zvakanaka uye inotumirwa nekukurumidza. Zviri nyore uye nekukurumidza kushandisa neremote control. Imba yekutandarira, yekurara, yekugezera neyekicheni zvese zvine disinfected, maita basa
Disinfection neFar-UV (222 nm Ultraviolet li ...
Ongororo yeFar-UV (222 nanometer) tekinoroji uye kugona kwayo kwehutachiona. Mhedzisiro ye COVID-19 denda ndeye kuwedzera kudiwa kwenzvimbo dzakachengeteka, dzisina utachiona. Izvo zvinodikanwa kudzikisa njodzi muindasitiri yekutengesa ndege, iyo yakafambisa vanhu bhiriyoni pasi rese mu2 ...
Germicidal Lamp Technology Kana uchitsvaga UVC Germicidal Fixtures, unogona kusangana nemhando dzakasiyana dzemarambi matekinoroji nekugadzirisa. Marambi ese eUVC anonyanya kuve envelope yequartz ine mercury nemamwe magasi nemagetsi. Kana mwenje warohwa, simba b ...
Zvakanakira UV-C Disinfection
Iwo mabhenefiti eUV-C Disinfection Maitiro Akawanda, Kusanganisira: Inoshanda kune ese marudzi ehutachiona, kusanganisira mabhakitiriya, mavairasi, fungi uye protozoa Hapana disinfection ne-zvigadzirwa (DBPs) yakaumbwa Yakadzika capital uye yekushandisa mutengo Nyore kushandisa uye kuchengetedza Yakachengeteka. uye zvakatipoteredza f ...